Dele Alli Ka Hadlay Inuu Ku Biirayo Real & Bandhigiisa Liita %
Dele Alli Ka Hadlay Inuu Ku Biirayo Real & Bandhigiisa Liita
By Laacib News	 On Apr 3, 2018
Xidiga kooxda kubada cagta Tottenham, wiilka lagu magacaabo Dele Alli ayaa wuxuu sheegayaa in uusan waxba kasoo qaadeen hadalada dhaleeceynta ah, taasoo uga imaanaya taageerayasha, warbahainta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Isboortiga.
Dhaleecaynta loo jeedinayo Alli ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu muuqaal ciyaareed liita uu so bandhigay kulamadii ugu dambeeyay, kuwaasoo uu udheelay kooxda kubada cagta Tottenham iyo gooldhalin la’aantiisa.
“Dadku waxay yihiin kuwa awood u leh inay sameeyaan waxay doonan, maxaa yeelay dadku waa ay kala duwan waxayna leeyihiin fikrado kala duwan,” ayuu Alli ku sheegay wareysi uu siiyay Shabakada Sky Sport ee wadanka Ingiriiska.
“Sidaas darteeda aniga mar walba waxaan ahay mid naqdiya, maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan mar walba aan sameeyo waxyaabo fiican iyo inaan kooxdeyda inaan ka caawiyo sidii ay guul ku heli lahayd,” ayuu hadalkiisa sii daba dhigay Alli.
Dhanka kale, da’yarkaan reer England ayaa wuxuu ka hadlay wararka lala xiriirinayo Real Madrid, kuwaasoo tilmaamaya in kooxda reer Spain ay diyaar utahay ina ukaxayso wadanka Spain, laakiin wiilkaan taasi diyaar u aha.
“Aniga hada waxaan aad ugu farax-sanahay inaan halkaan aan sii joogayo, maxaa yeelay waxaan wali ahay mid soo koroya, waxaana mar walba aan ubaahanahay inaan joojiyo halkaan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Alli.
Liiska Cayaartoyda Hal Jalle U Jira Iney Seegaan Lugta Labaad Ee Wareega Quarter Final-ka Champions League
Buffon Oo Shaaciyay Xidiga Kaliya Ee Gool U Dhalin Kara Sida CR7